कसरी मेरो छोरी एक सेल फोन मा जासूस ?
On: अक्टोबर 07Author: व्यवस्थापकच्यानल: Android, सेल फोन जासूस, सेल फोन ट्रयाकिङ्, कर्मचारी अनुगमन, मोबाइल जासूस स्थापना, IPhone, iPhone 5s जासूस सफ्टवेयर, मोबाइल फोन निगरानी, मोबाइल जासूस, मोबाइल जासूस अनलाइन, इन्टरनेट प्रयोग मनिटर, अभिभावक नियन्त्रण, जासूस Facebook दूत, Android लागि जासूस, IPhone लागि जासूस, जासूस iMessage, जासूस मोबाइल स्मार्टफोन, कल मा जासूस, एसएमएस मा जासूस, जासूस Skype, जासूस Viber, जासूस WhatsApp, ट्रैक जीपीएस स्थान कुनै टिप्पणी
कसरी एक सेल फोन मा जासूस
म कसरी मेरो छोरी गरेको सेल फोन मा जासूस गर्न सक्नुहुन्छ?
कसैलाई तिनीहरूले छोरी गरेको सेल फोन निगरानी सक्छ कसरी सोधेर अन्य दिन मलाई यस्तो लेखे. त्यो एक किशोरी थियो र अभिभावक त्यो अनुपयुक्त सन्देशहरू र फोटो पठाउन र प्राप्त गरिएको थियो चिन्तित थियो. म अक्सर आफ्नो बच्चाको वा किशोर गरेको अनलाइन वा "फोन" कल्याण मा चिन्ता आमाबाबुले इमेलहरू प्राप्त छु. धेरै अनिवार्य छोराछोरीलाई मा गुप्तचर छ के समर्थन थियो, जबकि, दिन को अन्त मा, आफ्नो राम्रो-जा सुनिश्चित गर्न आमाबाबुले हामी आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न आवश्यक र यो हाम्रो लागि तल छ. यो आफ्नो फोन कलहरू वा पाठ सन्देशहरू निगरानीका समावेश भने, साँच्चै, तिनीहरूले फोन मार्फत अनलाइन माथि प्राप्त हुन सक्छ भनेर केहि, त्यसपछि त यो हुन.
तपाईं चुपके एक सेल फोन निगरानी गर्न अनुमति र तपाईं फोन समावेश हुन सक्छ भनेर डाटा सबै प्रकार गर्न दूर पहुँच दिन्छ हुनेछ भनेर सेवाहरू अनलाइन एक नम्बर छन्. यसरी उनीहरूले पठाउन इमेलहरू कस्तो मा ट्याबहरू राख्न सक्छ र आफ्नो फोन मार्फत अनलाइन प्राप्त. तपाईं सबै पाठ सन्देशहरू र एसएमएस प्रसारित र प्राप्त देख्न सक्छौं. तपाईं पनि फोटो र साझा भइरहेका छन् कि तस्वीर र इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ इतिहास देख्न सक्छौं.
कसरी एक सेल फोन मा जासूस – सेल निगरानी सफ्टवेयर को लाभ
सायद सफ्टवेयर को यस प्रकारको छ भनेर सबैभन्दा शक्तिशाली सुविधाहरू एक फोन कल गर्न मा सुन्न क्षमता बाँचिरहेको छ - तिनीहरूले के रूपमा. यस्तो पाठ सन्देश निगरानी रूपमा आधारभूत सफ्टवेयर सुविधाहरू को सौन्दर्य तिनीहरूले मेटिएका छन् जब तपाईं पनि तिनीहरूलाई देख्न सक्नेछन् छ. सफ्टवेयर अर्को लाभ यो प्रयोगकर्ता यो छ कि बताउन लागि यो असम्भव छ भन्ने स्मार्ट फोन मा त गहिरो र गुप्त रुपले नै गरीएको एम्बेड्स छ. तपाईं एक चिन्तित आमा वा बाबु हुनुहुन्छ भने त, आफ्नो छोरी अनुपयुक्त व्यवहार छ फिक्री वा अनुपयुक्त सन्देशहरू प्राप्त छन्, सफ्टवेयर को यस प्रकारको तपाईं पनि तपाईं तिनीहरूलाई निगरानीका गरिएको छु भन्ने तथ्यलाई तिनीहरूलाई alerting बिना मा जा के पछि सत्य हेर्न अनुमति हुनेछ - सायद तपाईं भरोसा छैन भनेर एक वृद्ध केटा वा कसैलाई देखि. तपाईं जहाँ फोन देख्न सक्छौं जहाँ एक ट्रयाकिङ सुविधा पनि छ (र यसैले आफ्नो छोरी) फोन मा सर्नु छ सबै कहिलेकाहीं छ. साथै माथि लाभ रूपमा सफ्टवेयर तपाईं इतिहास कल हेर्न अनुमति दिन्छ, कल समय, जो भनिन्छ र जसले फोन कल गर्न प्रयोग गरिएको छ. संख्या फोनको सम्पर्क सूचीमा नाम मिलेन भने, तपाईं पनि ती नामहरू हेर्न सक्नेछन्.
पाठ सन्देशहरू मा जासूस गर्न कसरी
कसरी एक सेल फोन मा जासूस – तपाईंको छोराछोरीको सेल फोन मा निगरानी सफ्टवेयर स्थापना
अलिकति क्याच छ, यद्यपि. तपाईं पहिलो ठाँउ मा फोन गर्न सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्षम हुन आवश्यक. अब धेरै आमाबाबुले बस तिनीहरूले यस गरिरहेका छन् कि बच्चा बताउन थियो र यो समस्या हुनेछैन. खैर, शायद यो हुनेछ, तर आफ्नो विशेष अधिकार हो. अन्य अवस्थामा र विशेष गरी पुराना किशोरावस्था यो एक trickier प्रस्ताव हुन सक्छ र तपाईं चुपके सफ्टवेयर स्थापना गर्न खोज्नुभएको हुन सक्छ.
तपाईं यी निर्देशनहरू पछि एकपटक आफ्नो छोरी तपाईं ट्याबहरू राख्न सक्छ कि कुनै विचार हुनेछ त्यसैले निगरानी अनुप्रयोग अब फोनमा कहीं देखिने हुनेछ उनको. तपाईं लाइसेन्स कुञ्जी मागे गर्दा यो ध्यान दिनुहोस कि महत्त्वपूर्ण छ, तपाईं साइन अप र सफ्टवेयर लागि भुक्तान गर्दा beforehand यस खाएका छन् हुनेछ!
त्यसैले, तपाईं सफ्टवेयर लागि भुक्तानी गरेका छन् (मेरो छुट लिंक यो पृष्ठमा चेकआउट!) र तपाईं आफ्नो लाइसेन्स कुञ्जी छ र तपाईं लक्ष्य फोनमा अनुप्रयोगलाई स्थापना. अब के?
कसरी एक सेल फोन मा जासूस – सेल गुप्तचर सफ्टवेयर प्रयोग गरेर तपाईंको छोरी गरेको कलहरू मोनिटर गर्न
तपाईं माथि सबै कदम प्रदर्शन गरेका छन् भने, तपाईं अब निर्माता अनलाइन तपाईं को लागि प्रदान गरेको छ कि सुरक्षित निजी क्षेत्र मा लग सक्छन्, तपाईं सफ्टवेयर लागि भुक्तानी गर्दा उपलब्ध गराइएको इमेल र पासवर्ड प्रयोग. तपाईं फोन मार्फत देख्नासाथ कि जानकारी सबै पहुँच छौँ (पनि सबै तुरुन्त मेटिएको हुन्छ जो!).
अब तपाईं आफ्नो छोरी गरेको सेल फोन निगरानी गर्न कसरी गर्न एक समाधान छ र यो बारेमा खर्च हुनेछ $15.99 अनुप्रयोगलाई लागि. सफ्टवेयर शो को असंख्य समीक्षा रूपमा - यो मनोशान्ति वा आफ्नो छोरी संग एक भरोसा मुद्दा वा समस्याको तल प्राप्त गर्न आवश्यकता लागि पैसा राम्रो लायक छ. तापनि $50 पहिलो नजर मा एक ठूलो सोध्न लाग््छ, तपाईं यस सफ्टवेयर शायद सबैभन्दा विश्वसनीय अनलाइन छ कि पाउन छौँ र तपाईं या त काम गर्दैन वा तपाईं एक हात र मासिक installments मा एक खुट्टा खर्च हुनेछ भनेर सफ्टवेयर प्रदान गर्नेछ भन्ने घोटाला साइटहरु जोगिन आवश्यक.
यस विशेष सफ्टवेयर बारेमा कुरा ग्राहक सेवा उत्कृष्ट छ भनेर छ, र भुक्तानी तरिका धेरै र वैविध्यपूर्ण छन्. साथै, तपाईं सफ्टवेयर ठीक काम छैन भनेर भेट्टाउने छन् भने कसरी यो आषा थियो, तपाईं बिल्कुल कुनै तर्कको संग पूर्ण फिर्ती प्राप्त गर्न सक्छन्. यो अनलाइन सबैभन्दा विश्वसनीय ब्रान्ड र तपाईं यस्तो सानो मूल्य लागि प्राप्त भनेर विशेषताहरु अविश्वसनीय हो. यो घडी वरिपरि तपाईं को लागि काम एक गुप्तचर भएको जस्तै शाब्दिक छ. तपाईं COSTING समाप्त हुनेछ भन्ने कति पैसा कल्पना! आज सत्य पत्ता र बाँकी मा आफ्नो मन राख्न, अन्तिम मा.
तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ: कसरी मेरो छोरी एक सेल फोन मा जासूस ?
कसरी एक सेल फोन मा जासूस, How to spy onacell phone for free download, How to spy onacell phone without having it, How to spy onacell phone without installing software, How to spy onaiphone, पाठ सन्देशहरू मा जासूस गर्न कसरी, How to spy on your spouse